Ii-FAQ-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Ziziphi iisayizi zamatayara eemodeli ezahlukeneyo?
Ubungakanani betayara le-Mankeel Sliver Wings yi-10-intshi enkulu yamatayara erabha avuthelweyo, i-Mankeel Pioneer inkulu ngamathaya erabha aqinileyo ayi-10-intshi ye-hiah-elastic, kunye ne-Mankeel Steed yi-8.5-intshi yamavili erabha aqinileyo.
Ziziphi iimfuno zabakhweli?
Sincoma ukuba ubudala bomkhweli buphakathi kwe-14 kunye ne-60 yeminyaka ubudala.Ubunzima obukhulu bee-scooters zethu zombane yi-120KG.Ngenxa yezizathu zokhuseleko, sincoma ukuba abantu abanobunzima obungaphantsi kwe-120KG bakhwele.Ukuze uqinisekise ukhuseleko lwakho lobuqu, musa ukukhawulezisa okanye wehlise isantya ngobundlobongela, kuba umda wamandla obangelwa bubunzima bomkhweli, isantya, kunye nokuthambeka kwakhe kunokubangela ukuba umkhweli angqubeke.Kule meko, umkhweli kufuneka athwale uxanduva lokusetyenziswa ngokugqithiseleyo.Iingozi ezongezelelweyo ezibangelwa iimeko.
Ziziphi iingenelo ze-Mankeel scooters zombane ngokubhekiselele kubunzima, ukusebenza kunye nokunyamezela?
Izithuthuthu zombane ezithathu ezisanda kuphuhliswa zinentsebenzo eyahlukileyo kule miba.Ngeenkcukacha, nceda ubhekisele ku:
I-Mankeel Pioneer: Ubomi bebhetri yentlawulo epheleleyo ingafikelela kwi-40-45KM.Ubunzima obushiyekileyo bale modeli yi-23KG.Ityekele ngakumbi kubakhweli abathanda amandla awomeleleyo.Iqondo lokunyuka lingafikelela kuma-20 degrees.Kwaye ukulinganiswa kwamanzi kwibhetri ekhutshwayo kufikelela kwi-IP68, kunye nebhetri egciniweyo apho uluhlu oluphezulu lunokufikelela kwi-60-70KM.
I-Mankeel Silver Wings: Ubomi bebhetri bufikelela kwi-40-45KM, kwaye ubunzima be-scooter yi-14kg kuphela.Inokusongwa ngokulula kwaye iphakanyiswe ngesandla esinye.Kufanelekile kakhulu ukuba amantombazana akhwele.Ngokuqinisekileyo, ubukhulu bomthamo wokuthwala umthwalo wale modeli unokufikelela kwi-120KG, ngoko ke ifanelekile kubagibeli abangamadoda.Umzimba ugudile, uyilo lomzimba olufihliweyo ngokupheleleyo, ukusebenza kwe-APP, kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-Mankeel Steed: Ubomi bebhetri bunokufikelela kwi-35KM, kwaye isithuthi sinobunzima be-16KG.Yenzelwe kwaye iveliswe ngokungqongqo ngokuhambelana nemigangatho yokhuseleko yaseJamani.Ikwaxhotyiswe ngezibuko lokutshaja le-USB elisebenziseka lula kunye nekhonkco langaphambili.I-front hand brake + inkqubo ye-brake yevili yangasemva yamkelwe, into entsha kwaye elula.
Ngaba umda wesantya unokuvulwa ngabakhweli?
Izicwangciso zefektri ezingagqibekanga ze-Mankeel scooters zombane zisetelwe kwi-fixed-speed-speed ezintathu, abasebenzisi banokuhlengahlengisa isantya esahlukileyo kwi-APP.kodwa nceda uqiniseke ukuba ulandela imigaqo yokhuseleko lwengingqi yakho ukuseta isantya esihambelanayo.
Ingaba isithuthuthu sombane singathathwa kwindlela engaphantsi, uloliwe, inqwelomoya (ikhangelwe)
Imigaqo-nkqubo yamazwe kunye nemimandla iya kuhluka, nceda uqhagamshelane namagunya asekuhlaleni afanelekileyo kwangaphambili, kuba ii-scooters zombane zineebhetri ezakhelwe ngaphakathi, ukuba ufuna ukuthutha umoya, nceda uqhagamshelane nemithetho echaphazelekayo ye-airline yendawo kwangaphambili.
Njani malunga nokusebenza kokungangeni manzi
Ireyithingi yokungangeni manzi kweMankeel Silver Wings kunye neMankeel yi IP54.Ukukhwela ngaphandle kunye nokuhamba ngeenyawo kwimozulu yemvula akuvumelekanga.
Ireyithingi yokungangeni manzi kweMankeel Pioneer yi-IP55 kwaye isilawuli sebhetri esingangenwa ngamanzi sireyithingi IP68.Ukukhwela ngaphandle kunye nokukhwela kwimvula enkulu akuvumelekanga.Ukuba kuyimfuneko, kuphela umgama omfutshane wokukhwela ngaphandle kwimvula elula.
Ngexesha elifanayo, ngenxa yokhuseleko lwakho lomntu, akukhuthazwa ukuba ukhwele ngaphandle kwelinye imozulu embi nangaliphi na ixesha.
Ndingalukhuphela phi usetyenziso
Abasebenzisi banokukhuphela i-Mankeel APP kwi-manual, okanye bahlolisise ikhowudi ye-QR kwiwebhusayithi esemthethweni yaseMankeelde.Ifowuni ephathwayo ixhasa iinguqulelo ze-Android kunye ne-IOS.Unokukhangela i-Mankeel kwivenkile ye-Apple kunye ne-Google play ukukhuphela i-APP ye-scooter yombane ye-Mankeel.
Lithini ixesha lewaranti yesithuthuthu?
Ukususela kwixesha apho umyalelo osemthethweni usayinwe ngabasebenzisi bemveliso, sinokunika iwaranti yonyaka omnye ngaphandle kokuba isithuthi sonakaliswe ngamabomu.
Nceda ubhekisele koku kulandelayo ngemigaqo nemiqathango ethile
Yintoni onokuyenza ukuba isithuthuthu asiphumelelanga?
ukuba kukho ukungasebenzi kakuhle kwe-scooter, unokujonga kwaye ulungise iimpawu ezihambelanayo ezahlukeneyo kwincwadana.Ukuba awukwazi ukulungisa ingxaki kwaye uyilungise wedwa, ungaqhagamshelana neentengiso okanye umthengisi onxibelelana naye ngaphambili ukuze uqhubekisele phambili.
Ngaba kukhuselekile ukukhwela isithuthuthu sombane saseMankeel?
Ii-scooters zombane zikaMankeel zithobela ngokungqongqo iimvavanyo zobuchwephesha beendlela ezahlukeneyo zokhuseleko ngexesha loyilo kunye nemveliso.Ride i-Mankeel scooter yombane ikhuselekile ukuba nje ulandela izikhokelo zokukhwela ezikhuselekileyo kwincwadana yethu yemveliso.
Ngaba kufuneka nditshaje iibhetri phambi kokuzisebenzisa?
Ewe, kufuneka utshaje iibhetri ngokupheleleyo phambi kokuba uqale uzisebenzise.
Ngaba kufuneka "ndiqhoboshele" iibhetri zam?
Ewe, iibhetri kuya kufuneka zibe nomjikelo "woqhekeza" oquka imijikelo emithathu yokukhupha ngaphambi kokuba zifikelele ekusebenzeni kakuhle.Oku kubandakanya ukukhutshwa okupheleleyo okuthathu kunye nokutshajwa kwakhona okuthathu.Emva kwalo mjikelo wokuqala "wokuqhekeza" iibhetri ziya kuba nokusebenza okuphezulu okunokwenzeka kunye nokuguquguquka okuncinci kwamandla ombane phantsi komthwalo.
Ingaba iibhetri ziya kuyibamba ixesha elingakanani?
Zonke iibhetri ziya kuzikhupha ngokwazo xa zingasetyenziswa.Izinga lokuzikhupha lixhomekeke kwiqondo lokushisa apho zigcinwe khona.Ukubanda kakhulu okanye ubushushu bokugcina obushushu kuya kukhupha iibhetri ngokukhawuleza kunesiqhelo.Ngokufanelekileyo iibhetri kufuneka zibe
igcinwe kwiqondo lokushisa.
Yintoni into eyenziwa ngumzimba we-scooter?
Umqolo womzimba wenziwe nge-aerospace aluminium alloy kunye nokusebenza okugqwesileyo kunye nomgangatho.
Loluphi uhlobo lwetayara imodeli yeMankeel Silver Wings?Ngaba kulula ukufutha?
I-Mankeel Silver Wings yi-10-intshi yamavili erubha ane-inflatable, eqhelekileyo kwimingxuma yokunyuka kwamaxabiso ebhayisikile esihlala siyisebenzisa.Ukongeza, siya kukunika ityhubhu yomlomo wokwenyuka kwamaxabiso eyongeziweyo ukwenzela ukuba kube lula kuwe ukuba unyuse amatayara.
Ngaba ubushushu bunefuthe ekukhweleni?
Ukuba ubushushu bendawo yokukhwela budlula uluhlu oluphawulwe kwincwadana yemigaqo, kunokubangela umonakalo wetayara okanye okunye ukusilela ekusebenzeni.Nceda uqiniseke ukuba ulandela iingcebiso ezikwincwadana yethu yemveliso ukuphepha iingxaki ezingeyomfuneko zokhuseleko.
Ngaba ibhetri iyasuswa?
Ibhetri yeMankeel Pioneer iyasuswa kwaye inokutshintshwa.Ezinye iimodeli ze-Mankeel scooters zombane azixhasi ukuchithwa.Ukuba zichithwa ngaphandle kokugunyaziswa, ukusebenza kwe-scooter yombane kuya konakala.
Kutheni izibane zicima ngokuzenzekelayo
Oku kukuthintela ukulayita nokulibala ukucima nokuphelelwa ngamandla.Ukugcina amandla, siyile isithuthuthu ukuba sizivalele ngokuzenzekelayo emva kwexesha elithile ngaphandle kokusebenza.Ukuba awufuni olu seto, ungalutshintsha kwiAPP ukuze ucime ngokuzenzekelayo emva kwexesha elide okanye ucime lo msebenzi ngokuthe ngqo.
Ukuba ndifuna ukuthenga izincedisi ezinxulumeneyo, ndingazithenga phi
Unokukhetha ukuthenga kwiqonga lentengiso yomntu wesithathu elisebenza ngokusemthethweni nguMankeel okanye uqhagamshelane nenkonzo yethu yokuthengisa abathengi ukuze uthenge.
Ngaba singaba ngumthengisi webrand kaMankeel okanye umsasazi?
Ewe kunjalo, ngoku siqesha abasasazi behlabathi kunye neearhente zophawu.Wamkelekile kwiqhagamshelana nathi kuxoxaisivumelwano se-arhente, iimfuno zentsebenziswano kunye neenkcukacha zomthetho.
Yiyiphi inkxaso uMankeel ayinika abasasazi kunye neearhente?
UMankeel uneqela lobuchwephesha labasebenzi abali-135, abanokubonelela ngale nkxaso ibanzi ilandelayo:
1. Ixabiso kunye nokhuseleko lwemarike
UMankeel uneseti yemigangatho efanelekileyo, enobulungisa kunye neselubala ekukhethweni kunye nentsebenziswano yabasasazi.Kuphela ngabasasazi abahlangabezana nemigangatho yethu yophicotho lokuqala abanokubonisa iimpawu zemveliso yethu.Nje ukuba intsebenziswano yokusabalalisa uphawu iqinisekisiwe, nokuba ngokwexabiso lemveliso okanye unikezelo lwemveliso, siya kulandela ngokungqongqo imiqathango yentsebenziswano ukukhusela nokuxhasa amalungelo akho kunye nomdla kwindawo apho usasaza khona.
2. Inkonzo emva kokuthengisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa, isiqinisekiso sokufika kwexesha lokuhanjiswa kwezinto
Simise iindawo zokugcina iimpahla ezi-4 ezahlukeneyo phesheya kunye neendawo zokulungisa emva kokuthengisa e-United States naseYurophu, ezinokugubungela ulungiselelo kunye nokusasazwa eYurophu nase-United States.Kwangaxeshanye, sinokukubonelela ngenkonzo yokulahla inqanawa, ukukugcinela ugcino lolungiselelo kunye nokuthengiswa emva kokuthengisa Iindleko zenkonzo.
3. Umanyano lwentengiso oluqhelekileyo, ukwabelana ngezinto eziphathekayo
Ngokuphathelele kwimveliso kunye nokukhuthazwa kwegama kunye nokuthengisa, siya kwabelana ngokungagodli ngemifanekiso yemveliso, iividiyo zemveliso, izixhobo zentengiso, kunye nezicwangciso zokukhuthaza intengiso esinazo, ukwabelana ngeendleko zakho zentengiso, kwaye sikwenzele inkuthazo yentengiso ehlawulweyo.kwaye Yazisa abathengi kuwe ukuba benze imveliso kunye nokukhuthaza uphawu kunye ukwandisa impembelelo yakho kwaye uncede ukuhamba kwabathengi bakho.
Unjani umhla wokuziswa kwakho?
Sineendlela ezimbini zokuhambisa
I-1, i-Mankeel okwangoku ineendawo zokugcina iimpahla ze-4 e-USA / eJamani / ePoland / e-UK ezinokugubungela yonke indawo yase-USA naseYurophu, iqinisekisa ukugqiba ukuthunyelwa kwiiyure ze-8, kwaye ihlaziye inombolo yokulandelela kwiiyure ze-24.Kwimodeli nganye yemveliso, siya kulungiselela iiyunithi ze-1,800 ukuphendula kumyalelo wakho ongxamisekileyo.
I-2, Kwakhona, ukuba ufuna ukuthumela iimpahla ezivela kwi-factory yethu, siya kulungiselela iimpahla ngokuhambelana nomyalelo wakho kwaye siqinisekise ukuhanjiswa kunye nawe, ngoko siya kuvelisa kwaye sikuhambise kwishedyuli.
Kuthekani ngokupakishwa kwemveliso kaMankee?
UMankeel usebenzisa igwebu elinobume bendalo + ibhokisi + yokusonga iteyiphu, kwaye uphumelele uvavanyo lokuwisa kumphakamo ubuncinane we-175cm.Kuqinisekisiwe ukuba ayisayi konakaliswa ngexesha lokuthuthwa, kwaye iimveliso eziziswe kuwe zikhuselekile kwaye zintsha kraca.
Kuthekani ukuba abaqalayo abayazi indlela yokusebenzisa isikuta sakho sombane?
UMankeel unemiyalelo yephepha kunye neevidiyo zokufundisa indlela yokuyisebenzisa.Xa ufumana entshai-mankeel scooter yombane, nceda ufunde umxholo ofanelekileyo wencwadana yomsebenzisi kwiphakheji ngokucophelela ukuze uqinisekise ukuba unokuqonda ngokupheleleyo ukusetyenziswa kwethuisikuta sombane.Ukongeza, kukho izikhokelo zokukhwela ezikhuselekileyo kwincwadana yomsebenzisi eya kukuxelela ukuba ukhwele yethuisikuta sombaneikhuselekilely kunye dimithetho etailed for scooters zombane.